Kuisa uye kudzoka kurasikirwa bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Kurasikirwa kwechiratidzo, kunoitika pamwe nekureba kweiyo fiber optic chinongedzo, kunonzi kupinza kurasikirwa, uye kuiswa kwekurasikirwa bvunzo ndeyekuyera kurasikirwa kwechiedza kunoonekwa mu fiber optic core uye fiber optic tambo yekubatanidza. Kuyerwa kwehuwandu hwechiedza hunoratidzwa kumashure kune sosi kunodaidzwa kudzoka kurasikirwa bvunzo. uye kuisa kurasikirwa uye kudzoka kurasikirwa zvese zvinoyerwa muma decibel (dBs).
Zvisinei nerudzi, kana chiratidzo chichifamba nesystem kana chinhu, simba (chiratidzo) kurasikirwa hakudziviriki. Kana mwenje ukapfuura nepakati peiyo fiber, kana kurasikirwa kuri kushoma kwazvo, hakuzokanganisa mhando yechiratidzo che optical. Iyo yakakwira kurasikirwa, iyo yakaderera iyo huwandu hunoratidzwa. Naizvozvo, iyo yakakwira iyo yekudzoka kurasikirwa, iyo yakaderera kuratidzira uye zvirinani kubatana.
Jera enderera kuyedza pazasi zvigadzirwa
-Fiber Optical chigamba tambo
-Fiber Optical PLC mahwanda
Yezve fiber musimboti yekubatanidza bvunzo inoshandiswa neIEC-61300-3-4 (Maitiro B) zviyero. Maitiro IEC-61300-3-4 (Maitiro C) zviyero.
Isu tinoshandisa zvekushandisa pakuyedza muyero wezuva nezuva wehutano, Kuona kuti mutengi wedu anogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zvemhando yepamusoro. Yedu murabhoritari yemukati inokwanisa kuenderera dzakateedzana dzakadai dzinoenderana mhando mhando bvunzo.